जलाउनुहोस् सुत्नुअघि एउटा तेजपत्ता, ५ मिनेटमै देख्नुहुनेछ चमत्कारी फाइदा
बिहिबार, साउन २१, २०७८ ११:१०
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। ते’जपत्तालाई विशेष गरि परिकारलाई स्वा’दिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तेजपत्ता चिया देखि मासुका परिकार सम्ममा राख्न सकिन्छ । ते’जपत्ताबाट आउने वासनाले परिकारलाई मीठो बनाइदिन्छ ।
तेजपत्तालाई खानेकुरामा मात्र नभएर अन्य तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेजपत्तालाई उमालेर त्यसको पानी पिउनाले विभिन्न रो’गको औषधि समेत हुन्छ । तेजपत्ता प्राचिन समयबाट नै विभिन्न तरिकाले प्रयोग हुँदै आएको छ । प्राचिन समयमा तेजपत्तालाई खाने मात्र होइन, घरमा बालेर पनि राख्ने गरिन्थ्यो ।
एउटा कचौरा या कुनै भाँडोमा राखेर तेजपत्तालाई जलाउँदा त्यसले बत्तिको काम गर्नुका साथै घरमा मीठो वासना पनि फैलिन्छ । अहिलेको समयमा बत्तिको लागि तेजपत्ता बाल्नु पर्ने अवस्था नरहेकोले तेजपत्तालाई एउटा कचौरामा राखेर बाल्ने र त्यो तेजपत्ताको धुँवा मात्र आउने किसिमले राख्न सकिन्छ ।
धुवाँको एलर्जी हुने स’मस्या छ भने, त्यसलाई कुनै एक ठाउँमा राखेर ढोका बन्द गरिदिन सकिन्छ । यसरि निस्किएको तेजपत्ताको धुवाँले घरभरि वासना फैलिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाको सिर्जना गरिदिन्छ ।
तेजपत्ताको धुवाँले थकित व्यक्तिको पनि मुड ताजा गरिदिन सक्छ । यसको धुँवाबाट आउने वासनाले स्वा’स्थ्यमा नकारात्म’क असर गर्दैन। तेजपत्ताको धुवाँले गर्दा घरभित्र आएका माउसुली किरा फट्यांग्रा आदि भाग्छन् । त्यस्तै, यसको वासनाले गर्दा घरभित्र सर्प आउंदैन ।
१. यदि तपाइँको अनुहारमा काला दागहरु बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनको लागि तेजपत्ताको पातलाई पानीमा उमलेर अनुहार धुने गर्नाले अनुहार सफा हुनुका साथै दागहरु हटाउनमा मद्दत गर्छ ।
२. तेजपत्ताको पानीले अनुहार तथा त्वचालाई घामबाट बचाउनुका साथै त्वचाको रंगलाई समान बनाउन मद्दत गर्छ ।
३. त्यसैगरी तेजपत्ताको पानीले कपाल धुने गर्नाले कपाल नरम, मुलायम र चमकदार देखिन्छ ।
४. तेजपत्ताको पातलाई लेप बनाएर दहीम मिलाई त्वचामा लगाउनाले त्वचा सफा हुनुका साथै त्वचामा पोषण प्राप्त हुन्छ ।
५. तेजपत्ताको पातलाई घाममा सुकाएर धूलो बानाई त्यसले दाँत सफा गर्नाले दाँत मजबुत हुनुका साथै चम्किलो देखिन्छ ।